उपचार नपाएर थलिएकी छु बालबच्चा कसरी हेरुँ ? |
उपचार नपाएर थलिएकी छु बालबच्चा कसरी हेरुँ ?
प्रकाशित मिति :2017-08-03 15:37:36
सुनसरी । मेरो नाम बालकुमारी रसाइली हो । म सुनसरीको बराह नगरपालिका ८ सालबन्दीमा बस्छु । म दुई बीस र पाँच (४५) वर्ष नाँघे । मेरा नौ छोराछोरी छन् । श्रीमान पदम रसाइलीले आत्महत्या गर्नुभयो । म दुई वर्षदेखि बिरामी भएर ओच्छ्यान परेको छु । श्रीमान ज्यालामजदुरी गर्नुहुन्थ्यो । हामीलाई पाल्नुहुन्थ्यो । छोराछोरी हुर्काउने र मेरो उपचार गर्न नसकेरै उहाँले ८ महिनाअघि कोशीबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्नुभयो । (छोराछोरीलाई देखाउँदै ) यिनका बाबु गइहाले । मेरो यो हालत छ । मेरा नौ जना लालाबालाको अवस्था के होला ? कान्छी छोरी २ वर्षकी छे ।
कान्छी छोरी जन्माउदा अपरेशन गरेको घाउ निको भएन । पछि त्यही ठाउँमा हर्नियाको अपरेशन पनि गर्नुप¥यो । अप्रेशनको घाउ निको नभएपछि पेटमा प्वाल पारेर त्यहिबाट दिसा गर्नुपर्छ । डाक्टरले बेला बेला जँचाउन आउनु भनेको थियो । उपचार गर्न जान पनि पैसा नै चाहियो । कहाँबाट ल्याएर उपचार गर्न जानु ?
यो झुप्रो भएको ठाँउ पनि ऐलानी हो । (फाटेका कपडा देखाउँदै) यि हेर्नुस् त लुगाफाटाको हालत । यि नौ जना लालाबालालाई विहान वेलुका मागेर खुवाउन पनि सकेकी छैन । उपचार गर्न दुई अढाई लाख चाहिन्छ भन्छन् त्यति धेरै पैसा मैले कहाँबाट ल्याएर उपचार गर्नु ? त्यहि भएर अस्पताल नगएकी ।
अस्ति अस्पताल जादाँको खर्च पनि गाँउकै छरछिमेकले तिरिदिएका हुन । हुन त ठूलो छोरो त २१ बर्ष पुरा पुग्यो । उ २ वर्षदेखि घरमा छैन । कहाँ गयो पत्तो पनि छैन । भारत तिर गएको छ रे भन्ने हल्ला सुनेको छु । कहाँ छ खबर छैन ।
जेठी छोरी १९ वर्षकी भई । माईंलो छोरा १६ वर्ष, साइलो १४ र काँइलो ११ वर्षको छोरा छ । उनीहरु कोइपनि घरमा बस्दैनन् । गाँउतिर जान्छन् । कहिलेकाँही घर आउँछन् । उनीहरु पनि कहाँ बस्छन के खान्छन् थाहै हँुदैन ।
नौ वर्षकी छोरी, ८ वर्षको अन्तरे छोरा, ५ वर्षकी साईंली र दुई वर्षकी कान्छी छोरी घरमा छन् । यि चार जनाको हुनसम्म बिजोग छ । कहिले काँही यसो उठेर माग्न जाँउ भन्यो हिँडडुल गर्न सक्दिन । कहिले यिनीहरुको मुखमा माड पर्छ धेरै दिन त भोकले रुँदै रुँदै सुत्छन् । यि छोरा छोरीले पढ्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । कोही कसैले पढाइदिए हुन्थ्यो । यिनै लालाबालाका लागि भएपनि मैले केहि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । तर, थलिएकी छु केहि गर्न सक्दिन । उपचार गराउँ पैसा छैन । खै के गर्नु गर्नु ? पहाडले नै थिचे जस्तो लाग्छ ।
(आशिष विश्वकर्माको सहयोगमा लिलाराज भटटराईको प्रस्तुति)